May Nyane: မြသီလာအလွမ်းပြေ(၉)
ဟုတ်တာပေါ့ ဆရာမ။ အောင်မြင်ခဲ့တာပေါ့။
ဒါကြောင့်မို့ ဆရာမ စာသင်ရင် အတန်းမှာ လူအပြည့်နဲ့။ ဆရာမလို ငယ်ငယ်ချောချောကို ကျောင်းသားတွေက ခေါ်တာ အမေ တဲ့။ :)
ဘ၀ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ် ခဲ့ဖူးတဲ့ လှိုင် နယ်မြေ အကြောင်းဖတ်ရတာ လွမ်းစရာအပြင်၊ သံဆူးကြိုးတွေခပ်ထားတော့ ရင်နာပြီး၊ ဒေါသဖြစ်စရာလဲကောင်းပါတယ်။
အဲဒိ ဓာတ်ပုံထဲက လူငယ်ကန်တင်းရှေ့က လမ်းမမှာတစ်ချိန်က ကျောင်းသားတွေ လွတ်လပ် ပျော်ရွှင်စည်းကားလို့ ။ ၄၅ ကားဂိတ်က၀င်တဲ့ Cash အရှေ့မှာအမတို့ မြန်မာစာဌာနနော်။ အဲဒိက ခပ်နွဲ့ နွဲ့မြန်မာစာ ဆရာလေးအကြောင်းတော့မပါပါလား။ :D
အခုတော့ လှိုင်တက္ကသိုလ်ကို ပညာရေးတက္ကသိုလ် လေ့ကျင့်ရေး ကျောင်း မူလတန်း၊ အလယ်တန်းအဖြစ် အဆင့်မြင့်ထားတယ် လို့ ကြားတာပဲ။
သေချာတာကတော့ လှိုင်ဟာ တက္ကသိုလ်မဟုတ်တော့ဘူး။
ပြီးရင် ချိုသင်းတို့ မဲဇာအကြောင်း လာတော့မယ် :P
မူကြိုဆိုင်းဘုဒ်နဲ့ အာစီတူးပုံ ကျွန်တော့်မှာရှိသား ..
တီချယ်ကြီး စိတ်မကောင်းမှာစိုးလို့ မပေးတာ :(
thanks for the post and the song I like very much. But what I know was only May Khalar's version.
်ခပေါင်းဆောင်မှာနေရတဲ့အချိန်ကျတော့ လှိုင်တက္ကသိုလ်က သိပ်ခြောက်သွေ့နေခဲ့ပြီ။ အင်း...တစ်ချိန်တုန်းက သိပ်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ ဆရာမစာတွေဖတ်ရမှ ပြန်တွေ့ရတော့တယ်။
ချိုသင်းရေ.. တကယ်တော့ အောင်မြင်တယ်ဆိုတာ စာသင်ကောင်းလို့ဆိုတာထက် တကယ်ပဲ ကလေးတွေနဲ့ နီးစပ်လို့ ဖြစ်မှာနော်..။ ကလေးတွေက ပိုသိမှာ..ဟုတ်တယ်မို့လား..။ ပြီးတော့ အဲဒီတုန်းကတည်းက အမေခေါ်ခံရလို့ စောစော အိုသွားတာနေမှာ :D (မှတ်မိသေးတယ်.. အဲဒါ ထွန်းထွန်းမြင့်နဲ့ မိုးသွင်သွင်က စလိုက်တာ)။
ကမောင်ရင်..နောက်ဆက်ပြီး လှိုင်အကြောင်း ရေးရမှာက ငိုချင်စရာတွေချည်းပါပဲ။ တကယ်ပဲ လှိုင်ကို မူလတန်း ကျောင်း လုပ်ပြီးမှ အမတခေါက်ရောက်တယ်။ တကယ်ပဲ မျက်ရည်ကျခဲ့ရတယ်..။ လှိုင်ဟာ အပစ်ပယ်ခံထား ရတဲ့ ဟောင်းနွမ်းတဲ့ အဆောက်အဦးအိုကြီး သက်သက်..ဖြစ်နေပြီလေ။ (ဆရာနွဲ့နွဲ့လေးက သူငယ်ချင်းပဲ..ဒါပေမဲ့ မချစ်လို့ မထည့်တော့ဘူး :D)
ငထက်နော်.. ဓာတ်ပုံတွေအကုန်ပေး.. မရဘူး။ အဲလိုသုံးမှ မှတ်တမ်းဖြစ်မှာလေ။ ဓာတ်ပုံမပါလည်း စိတ်မကောင်းစရာတွေ ရေးရမှာပါပဲ ငထက်ရာ..။
steve evergreen .. ဟုတ်တယ်.. ကျမ မေခလာသီချင်းလိုချင်တာ.. မရလို့။ ဒါလေးပဲ တင်ထားလိုက်ရတာ။ ဒါတောင် ညီမလေး တူးတူးသာကျေးဇူးနဲ့။
ရွာသားလေးရေ.. ပျော်စရာကောင်းတာရော အဓိပ္ပါယ်ရှိခဲ့တာတွေရောပေါ့..။ တကယ်တော့ ဒင်းတို့က တက္ကသိုလ်ဆိုတာကို အဓိပ္ပါယ် မရှိတော့အောင် လုပ်နေကြတာလေ..။
၁၉၉၅ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိန်ရတု တုန်းက ထုတ်တဲ့ တချိန်တုန်းက တက္ကသိုလ် သီချင်းခွေထဲက သီချင်းတွေ လိုချင်ရင် ပေးပါရစေ...။
အမရဲ့ မြသီလာ အလွမ်းပြေကို လိုက်ဖတ်ရင်း သီချင်းနှင်းဆီကို နောက်တစ်ခါ ပြန်ဖတ်ဖြစ်လိုက်တယ်။ btw, banner လေးနဲ့ ခုရေးလက်စ မြသီလာအလွမ်းပြေနဲ့ အရမ်းလိုက်တာပဲ :)
ဘာနဲ့ပို့ ပေးရင်ကောင်းမလဲဟင်...
E mail နဲ့တစ်ပုဒ်ချင်းစီ Attached လုပ်ပြီးပို့ ပေးရင် ရမလား...။
ဆရာမရဲ့E mail လေး သိပါရစေ...။
အိုး... မျက်စေ့ အလွန်ရှန်းသော သက်ဝေပါ...။
ဆရာမ E mail ရပါပြီ...။ ခု ပို့ လိုက်ပါ့မယ်နော်...။
အင်း လွမ်းတော့ လွမ်းတယ်။ တက္ကသိုလ်ကို ဟုတ်ဘူး။ မြန်မာပြည်ကို အဟင့်။
ဆရာမရေ ဖတ်ရတာလွမ်းစရာကောင်းလိုက်တာ။ ဓါတ်ပုံလေးကြည့်ပြီး လူငယ်ကင်တန်းလေးကိုလည်း လွမ်းသွားတယ်။ကြူကြူမာလားသေချာတောင်မမှတ်မိတော့ဘူး လူငယ်က စားပွဲထိုးကောင်မလေးလေ။ T4 ကိုလဲလွမ်းတယ်။ ကျောင်းထဲက အချိန်တွေ အားလုံးကို လွမ်းတယ်။
(၁) ကျနော်က ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကို ၉၇ မှာ ရောက်တာ ဆိုတာ အစ်မ မရှိတော့ဘူးပေါ့။
(၂) ကျောင်းမှာ ဆရာမလေးတွေက ငယ်တယ်။ မကြာခင်တုန်းကလို ကန့်သတ်ချက်တွေ ထပ်မထွက်ခင်တုန်းက စီနီယာမမတွေနဲ့ ခွဲမရဘူး။ သူငယ်ချင်းက ရည်းစားစကားလိုက်ပြောတာ ဆရာ/ဆရာမ နားနေခန်းထဲ ဝင်သွားမှ ပြေးပေါက်မှားခဲ့တာ မှတ်မိတယ်ဒ
(၃) “ကြည်အေးရဲ့ လက်တွေ့သရုပ်မှန် စာပေ” ရှိရင် တင်ပေးပါ။
(၄) ဆရာမင်းသိုက်မွန်ကို ကျနော်တော့ မမီဘူး။ ကျနော့်ထက် နောက်ကျတဲ့ ခဂ္ဂ (ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ကဗျာဆရာ) တို့တော့ မီတယ်။ အလွန်အေးတဲ့ဆရာတဲ့။ စာသင်ခန်း အပြင်မှာ တပည့်တွေနဲ့ လည်ပင်းဖက်ပေါင်းပေမယ့် သူဆုံးခါနီးမှ မင်းသိုက်မွန်မှန်း သိကြသတဲ့။ ဆရာက မူးနေရင် အတော် ငိုင်သတဲ့။
လင်းရေ..ဒါတောင် လွမ်းသမျှ အကုန်မရေးဖြစ်သေး.. ကြွေလွန်းလို့...။
သင်ကာရေ...comment လေးတွေကိုက အချက်အလက်လေးတွေပဲ..ကျေးဇူး။
ကြည်အေးစာတမ်းက ရှိတော့ဘူး။ ၁၉၈၉ကတည်း ကလေ။ မင်းသိုက်မွန်အကြောင်းကြားရင် ခုထိ စိတ်ထိခိုက်တုန်းးး လူတော်တွေကို အလဟဿ ဆုံးရှုံးရတာပဲ။
မ ရေ… မ အလုပ်စ၀င်တဲ့နှစ်က ကျွန်မတို့တက္ကသိုလ်စရောက်တဲ့နှစ်ပေါ့…
လှိုင်မှာသာတက်ရရင် မ တပည့်ဖြစ်ခွင့်ရမှာ…
မြန်မာစာဆရာမလေးတွေက သိပ်ချစ်ဖို့ ကောင်းတာ…
ဆံထုံးလေးတွေနဲ့မြန်မာအကီင်္ျလေးတွေနဲ့ သိပ်ကျက်သရေရှိတာ…
မ ရေ… မြန်မာပြည်က စာရေးဆရာအများစု အသည်းရောဂါနဲ့ဆုံးသွားတတ်ကြတယ်နော်…
လူတော်တွေ အရက်သောက်ရင် သိပ်နှမျောတာပဲ မ ရယ်…
၁၀ ကို ဆက်ဖတ်လိုက်ပါဦးမယ်..